Iye zvino zvatine macOS High Sierra yeruzhinji beta, ngationei rondedzero yemidziyo inoenderana | Ndinobva mac
Jordi Gimenez | | macOS High Sierra, Mac makomputa
Iyi ndeimwe yeaya rondedzero ayo ari nyore kutsanangura sezvo isu tichigona kutaura kuti shanduko dzakaitwa mune iyi nyowani vhezheni ye macOS High Sierra iyo yekushandisa system yakura Nezve kugadzikana kwayo uye kuvimbika, inowedzerawo kugadzirisa mune manejimendi manejimendi uye nekushandisa kwese kunatsiridzwa.
Isu takatotaura pane dzimwe nguva dzakapfuura kuti isu hatina shanduko huru maererano nemabasa, maturusi kana kunyorera, asi isu tinopa kusimudzira kwakasimba kweOS iyo yatove kushanda nemazvo nhasi. Ndokusaka tichiti pakutanga kuti rondedzero yeMac inoenderana neMacOS High Sierra iri nyore kutsanangura kubvira ese anowirirana ne macOS Sierra anogona kuvandudzwa kune iyi vhezheni itsva.
Rondedzero inonzwisisika izvo zvatakaona kare mukuratidzwa kweiyo nyowani Mac inoshanda system inotaridzika seiyi:
Mac mini 2010 uye gare gare
Ese MacBook Pros 2010 uye gare gare
Mune ino runyorwa tinoona kukosha kwazvinoita kuve neApple timu maererano nesarudzo nekuti ivo vanowana rutsigiro rwepamutemo kwenguva yakareba. Zvikwata zvakati wandei kubva kumagumo kwa2009 kusvika kuneazvino inguva yakareba chaizvo yatinogona kunakidzwa neMacs uye nezvimwe zvezvinhu zvitsva zvinoitwa muhurongwa, pamusoro pekuvandudza kwakawanda kunowedzerwa muMacOS kunofarira matimu ekare akafanana seyazvino uno. Isu takadhinda patsva runyorwa rweMac makomputa anoenderana neiyi vhezheni ne ichangoburwa macOS Yakakwira Sierra yeruzhinji beta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Iye zvino zvatine macOS High Sierra yeruzhinji beta, ngationei runyorwa rweanowirirana madivayiri
Pandinoedza kuvhura iyo faira yeiyo MacOsierra higt kuisirwa paMacBook Air pakati pa2011 neSierra yakaiswa, ndinowana yambiro: "kudzoreredza faira rakakuvara".
Izvo zvinondisiya ndisina kupokana uye kushamisika nekuti ini handizive zvaunoreva.
Zvinotaridza kunge bug mune yekuisa beta, ndapota edza kurodha pasi mugadziri zvakare.
Ini ndinoramba ndichiwana zvikanganiso zvitatu:
-Iyo system inodziya kupfuura mune yazvino vhezheni.
-Kana chivharo chikavharwa, kuzorora uye chifukidziro chasimudzwa, iyo sisitimu inoramba yakaturikwa.
Kupenya hakurambe kuri patinoisiya kana tadzima Kana tavhura komputa, tinofanirwa kuidzora zvakare?
Kune zvikamu jj9674,
iyo system inopisa? Ini ndinofungidzira iwe uchireva Mac, asi huya, ini handicherechedze kupisa kwakanyanya futi. Zvinoenderana nezvakawanda pamashandisiro aunoita michina.
Chinhu chekuvhura nekuvhara chinhu chinoshamisira kuti chakarembera nekuti harisi dambudziko rinokurukurwa mumaforamu akasarudzika, wakariisa rakachena here? muchikamu? haifanire kutadza.
Iwe une kupenya mumotokari kana manyore? Kana iwe unayo mumotokari yako, zvinogona kunge zvinokwana panguva yekuvhura. Hatina kuverenga zvichemo nezve izvi futi, asi ramba uchifunga kuti iri beta uye inogona kunge iine zviputi.
kukwazisa uye utiudze!
Ini ndakaisa macOS High Sierra, pane yangu Mac modhi MBP 13.3 ″, yakatengwa muna 2015, handigone kuivhura, ndinofanira kuitangazve, mushandisi anobuda obvunza password uye hapana nzira
Chenesa Mac kubva paMarware neAdware Cleaner
Bvisa kushambadzira paunenge uchivhura neBlock Kushambadzira painternet